अमेरिकामा देहत्याग गरेकी सुनिताको सु’सा’इड नोटमा नेपाली युवाको नाम भेटिएपछि….. – Etajakhabar
अमेरिकामा देहत्याग गरेकी सुनिताको सु’सा’इड नोटमा नेपाली युवाको नाम भेटिएपछि…..
नेपालीहरूको घनावस्ति रहेको सानफ्रानसिस्को बे एरियामा देहत्यागको अर्को दुखद खबर केहि समय अगाडी थपिएको छ । २७ वर्षीय नेपाली युवतीले आफ्नै कोठामा देहत्याग गरेकी थिईन । सानफ्रानसिस्को डाउनटाउनमा रहेको आफ्नै कोठाको पंखामा झु ण्डि एर उनले देहत्याग गरेकी हुन् । प्रहरी घटनास्थलमा आएर मुचुल्का उठाई पोष्टमार्टमका लागि श व अस्पतालमा लगेको छ । २७ वर्षीय सुनिता लिम्बुले देहत्याग गर्नु अगाडि सु’सा’इड नोट पनि लेखेकी छन् ।
परिबार स्रोतका अनुसार सुनिता लिम्बु देहत्याग गर्नु केही बेर अगाडिसम्म घरमा रहेका परिवारका सदस्यहरूसँग राम्रैसँग कुराकानी गरिरहेकी थिइन । बुवा, आमा र परिवारका अरू सदस्यसँगै उनी सानफ्रानसिस्को डाउनटाउन नजिकै वस्तै आएकी थिइन । सबै जना घरबाट बाहिर निस्किएको केही बेरमा नै उनले देहत्याग गरेकी हुन् । देहत्यागको कारण नोटमा लेखिएको छ । उनका श्रीमान् बेलायतमा वस्तै आएका छन् । उनको एउटा बच्चा पनि छ । सुनिता सानफ्रानसिस्को मै एक जना नेपालीको रेष्टुरन्टमा काम गर्दै आएकी थिइन ।
अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गरेपछि अमेरिकी प्रहरीले परिवार भेट्यो । सु-साइड नोट, झु-ण्डिएको प्रकृति र पोस्टमार्टम रिपोर्टका आधारमा सुनिताले आ-त्मह-त्या गरेको अमेरिकी प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ । मृ त्युवरण गर्नु अगाडि सुनिताले लेखेको सु साइड नोट प्रहरीले परिवारलाई फिर्ता दियो । सुनिताले सूसाइड नोट दुई पटक लेख्न प्रयास गरेको देखिन्छ । वापहिलो पानाको बिच भागमा उनले लेख्न शूरु गरेर अपुरो छोडेकी छन् ।
सानफ्रानसिस्कोमा बस्ने युवा अविशेकको नाम लेखेपछि उनले वाक्य पुरा गर्न सकिनन् दोस्रो पानाको सिरानमा भने उनले मृ त्यु वरण गर्नु पर्ने कारण व्यक्ति भएको खुलाएकी छन् । सू साइड नोटमा लेखिएको छ “अविशेक इज माई रिजन अफ डे थ” अर्थात् ‘अविशेक मेरो मृ त्युको कारण हो ।’
बुवा, आमा र परिवारका सदस्यहरूलाई अविशेकको बारेमा कहिल्यै केही नभनेकी सुनिताले सू साइड नोटमा मृ त्युको कारण नै अविशेक भनेर नाम किटान गरेपछि थप खुलदुली भयो । कसैसँगको प्रेम र सम्बन्धको आवेगमा आएर सुनिताले यस्तो गरिन भनेर विश्वास गर्न गाह्रो भए पनि नियतिले स्वीकार गर्न बाध्य बनायो । आमा गोमा अधिकारीले भक्कानिँदै भनिन “छोरीको कसैसँग कुनै सम्बन्ध थियो भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । हामीलाई कुनै तनावमा भएजस्तो पनि देखाइनन् । अघिल्लो दिन मात्र साथीहरूसँग उसले रमाइलो भेटघाट गर्दै फोटो खिचाएर फेसबुकमा राखेकी थिइन ।”
नपुग्दो केही थिएन । अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट म्यानेजर भएर काम गरिरहेकी सुनिता परिवारसँगै बस्तै थिइन । विश्वको महाशक्ति र वैभवको देश अमेरिकामा बस्दा पनि सङ्गत, सोच र मनस्थितिले मानिसलाई अप्रिय बाटोमा हिँडाउन सक्छ भन्ने यो एउटा दुखद दृष्टान्त हो । जीवनको उत्तरार्धमा हिँडिरहेका बुवा गङ्गा लिम्बु बुढेसकालमा सहारा दिने जवान छोरी गुमाउँदाको पीडाले अहिले पनि तङ्ग्रिन सकेका छैनन् । सन्तानको वियोगमा रहेका लिम्बुले दूरबिन नेपालसँग कुरा गर्दै भने “मेरो छोरीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गराउन सकिन्छ की सकिँदैन भनेर साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरिरहेको छु । परदेशमा दुख गरिरहेका अरू नेपाली परिवारले मेरो जस्तो सन्तानको वियोग सहनु नपरोस् भन्ने मेरो चाहाना छ ।”
सानफ्रानसिस्कोमा बस्ने नेपाली युवा अविशेक लकन्द्री र सुनिता लिम्बु बिच डेढ वर्ष अगाडि देखि नै सम्बन्ध नजिकदै गएको देखिन्छ । सुनिताको फेसबुक म्यासेन्जरमा सुरक्षित रहेको म्यासेज अध्ययन गर्दा घटनाको कारण जो कोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्छ । दुई जना बिचमा एक अर्काको शारीरिक बनौट देखि अरू थुप्रै योजनाका विषयमा रोचक संवाद भएको भेटिन्छ । अविशेक नेपाल गएर अर्को केटीसँग सम्बन्ध बढाए पछि भने परिस्थिति उल्टो भयो ।
एकाएक अबिशेक टाढिन खोज्ने तर सुनिता संवन्धबाट अलग हुन नदिने शैलीका लिखित संवाद म्यासेन्जरबाट आदान प्रदान भएको छ । पुरानै अवस्थालाई निरन्तरता दिलाउन सुनिताले हर प्रयास गरेकी छिन् । अविशेकलाई आ त्मह त्या गर्न सक्ने मनस्थितिमा पुगेको आवेशपुर्ण चेता वनी पनि दिएकी छन् । लिखित संवादमा दुवै पक्षले संयमता गुमाउँदै गए । सुनिताले घरको पङ्खामा सल बाँधेर ‘यसैमा झु न्डिएर म र्छु’ भनेर पङ्खा र सलको फोटो समेत पठाएकी छन् । जवाफमा अविशेकले ‘म र्नु एक मात्र उपाय भए म र’ भन्ने लिखित जवाफ दिएका छन् ।
लिखित संवादको बिचमा फोन संवाद र फेरि लिखित संवाद चलिरहेको भेटिन्छ । फोन संवादमा पनि सु साइडको विषयमा कुराकानी भएको हुनसक्ने देखिन्छ । लिखित संवादमा अविशेकले सु साइडको कुरा गरेर आफूलाई ‘ब्ल्याक मेल’ गरेको आरोप लगाएका छन् ‘प्रहरी र आकस्मिक सेवाको ९११ र सुसाइड अर्गनाइजेशनलाई खबर गरेको’ अविशेकले पठाएको म्यासेजमा देखिन्छ । तर अविशेकले उनलाई जोगाउन परिवारका सदस्यलाई भने जानकारी गराएको देखिँदैन । दुई जना बिचको सम्बन्ध र पछिल्ला खराब संवादबाट थपिँदै गएको मानसिक तनावले सुनिता अप्रिय निर्णय गर्ने मनस्थितिमा पुगेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
लिखित संवादमा सुनिताले एक महिना आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेकी छन् । अविशेकले त्यसलाई अस्वीकार गर्छन् । सुनिताको यस्तै स्वभावले अरूसँग सम्बन्ध बिग्रिएको आरोप अविशेकले लगाएका छन् । सपना टुटेर बेचैन बनेपछि मानसिक रूपमा कमजोर देखिँदै गएकी सुनिता सम्बन्ध तोडिएर बाच्नु भन्दा भौतिक रूपमा अलग हुने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । अविशेकले सुनिताको भनाइलाई ध म्कीको रूपमा नलिई उनको तनाव कम गर्ने प्रयास गरेको भए सायदै यो परिस्थिति आउने थियो ।
Posted on: Thursday, October 3, 2019 Time: 8:06:59
अस्ट्रेलियामा युवा फुटबलर अमित सोनार र रमिला मर्हजनको निधन
अनि उनी चीनमै रोकिए…
अस्ट्रेलियामा ललितपुरकी रमिलाको यसरि भयो दुखद निधन !
अमेरिकन आइडलमा नेपाली युवा, निर्णायकले भने : हलिउडमा भेटौंला
गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकन आग्रह गर्न प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले, बेलायती सेनाका प्रमुख मार्क कार्लेटोन–स्मिथसँग सैनिक मुख्यालयमा पुगेर राखे माग !
चीनको वुहानबाट १७५ जनालाई उद्दार गर्दा विमानस्थल घट्यो नसोचेको नमिठो घटना !
मध्यरातमा चिनको वुहानबाट १७५ नेपाली लिएर काठमाडौ आइपुग्यो नेपाल एयरलाइन्सको जहाज !
चीनको वुहानबाट १७५ नेपाली बोकेर उड्यो नेपाल एयरलायन्सको जहाज, फर्कन लाग्दा उच्च ज्वरो देखिएका ६ जना नेपाली विमानस्थलमै रोकिए !
नेपाल वायुसेवाको जहाजमा हङकङबाट नेपाल आउने क्रममा जहाजमा नै बेहोश भएका नेपालीको निधन
नेपाली चढेको बिमान समुन्द्रमा खस्यो
‘एमसीसी’ टेबुल गर्न नमान्दा जेल, मैले कुनै अपराध गर्‍या छैन : महरा (भिडियो अन्तर्वार्ता)
-6441 second ago
नेपाल आइडलकि रचना रिमालकि आमा छोरीको प्रस्तुति देखेर रोइन, रचनालाइ दीइन घरबाटै आशिर्वाद (हेर्नुहोस भिडियो)
-5950 second ago
प्रजातन्त्रको दिवसको अवसरमा बाँके कोहलपुरमा ८४ जनाले गरे रक्तदान
-5363 second ago
महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा आउने भक्तजन एवं दर्शनार्थीको सवारी आवागमनलाई यसरि गरिदै छ व्यवस्थापन,
-3990 second ago
फागुन ११ मा जन्मदिन मनाउन प्रधानमन्त्री ओली तेह्रथुम स्थित आफ्नो जन्मघर जाँदै, यस्तो छ तयारी
-114 second ago
नेपालगन्ज खेलमय, प्रधानमन्त्री कप अन्तराष्ट्रिय महिला भलिवल हुँदै
यसवर्ष महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिमा दर्शनका लागि यस्तो नियम लाग्नु हुँदै !
स्ववियु निर्वाचनको विधि परिवर्तन गर्न अनेरास्ववियुका नेताको माग, निर्वाचन स्थगित हुनु दुखद्